Fanaovan-dalana: 200 km hatramin’ny 250 km isam-paritra | NewsMada
Fanaovan-dalana: 200 km hatramin’ny 250 km isam-paritra
Tonga ao amin’ny seranan-tsambon’ny Toamasina, ny faran’ny herinandro teo ny fitaovana vaventy maro, fanaovan- dalana. Nijery ifotony izany ny filoha Rajoelina Andry, ny alahady 24 janoary teo. Fitaovana vaventy, ahitana bulldozers, compacteurs, chargeuses, kamiao mpitatitra rano, sns. Hatolotry ny fanjakana foibe ho an’ny faritra eto amintsika ireo, hampiasaina hanarenana ny lalana isaky ny faritra, hampifandray ny distrika, ny kaominina, ny fokontany manerana ny Nosy.
Avy amin’ny fisian’ireo fitaovana avo lenta ireo, hampitomboina ho 200 km hatramin’ny 250 km isam- paritra farafahakeliny no tokony vitan’ny faritra mahazo ny fitaovana, raha 10 km isam- paritra tamin’ny taona 2020 teo. Antony, tanjon’ny fanjakana foibe ny hamerina indray amin’ny laoniny, lalana mirefy 50.000 km, nisy tamin’ny andron’ny fanjanahantany, ho azo ampiasaina indray. Tsiahivina fa ny 15.000 km tamin’io ihany no hany azo ampiasaina amin’izao fotoana izao.
Tokony ho vita ny RN 5 sy ny RN 1 bis
Miisa valo ny faritra voalohany handefasana ireo fitaovana ireo, Analamanga, Sava, Androy, Bongolava, Vakinankaratra, Boeny, Vatovavy Fitovinany, Analanjirofo ary Sava. Antenaina fa hanao laharam-pahamehana ny hanamboarana ny lalam-pirenena ny faritra voakasika. Anisan’izany ny RN 5 any Analanjirofo, mampifandray ny distrikan’i Soanierana Ivongo, mandalo Mananara Avaratra hatrany Maroanstetra. Eo koa ny RN 1bis any Bongolava, mampifandray azy amin’i Maintirano, renivohitr’i Melaky. Manara-maso akaiky azy ireo ny fanjakana foibe.